“BFF” လေးစိမ်းသွားရုံနဲ့ သင့် Facebook account လုံခြုံပြီလား?? – AsiaApps
March 28, 2018 March 28, 2018 fairyApp News / FeaturesNo Comment on “BFF” လေးစိမ်းသွားရုံနဲ့ သင့် Facebook account လုံခြုံပြီလား??
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက facebook တခွင်မှာ “BFF လို့မန့်ကြည့်လိုက်ပါ စိမ်းသွားရင် သင့် facebook အကောင့်လုံခြုံပါပြီ”ဆိုတဲ့ post တွေတော်တော်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး လိုက်မန့်ကြတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကိုမှ လွယ်လွယ်ကူကူယုံလို့မရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒါတွေဟာတကယ်လားဆိုတာကိုတော့ ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုလာပါတယ်။
မိတ်ဆွေ သင်ရော BFF လို့ comment box မှာမန့်ခဲ့ဖူးပြီလား? အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းသွားရဲ့လား? မပြောင်းသွားလို့ သင့် facebook account မလုံခြုံတော့ဘူးလို့ ခံစားနေရပြီလား?
သင့်ရဲ့ BFF ဆိုတဲ့ comment လေးအစိမ်းရောင်ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ မပြောင်းသည်ဖြစ်စေ သင့်အကောင့်လုံခြုံမှုကို ဘာမှအာမခံချက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပြပါရစေ။ Facebook မှာ BFF ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးသာမကပဲ အရောင်ပြောင်းပြီး နှိပ်လိုက်ရင် animation လေးတွေပြပေးတဲ့ စကားလုံးအများကြီးရှိပါတယ်။
You’re the best, bff, bffs, best wishes, you got this, you’ve got this, you can do this, rad, radness, congrats, congratulations, (ဂုဏ်ယူပါတယ်), xo, xoxo(ချစ်ခြင်းများစွာ), good vibes စတဲ့ စကားလုံးတွေမှာလဲ animation တွေအလုပ်လုပ်အောင် facebook က လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုတော့ facebook text delight လို့ခေါ်ပြီး သုံးစွဲသူတွေကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ ထည့်ပေးထားတာပါ။ Facebook အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမျိုးကို မနှစ်က Harry potter theme လေးတွေဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့လေးဖွဲ့နာမည်တွေရိုက်ထည့်ရင် အရောင်ပြောင်းတာမျိုးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ဖူးပြီး အမေများနေ့အတွက်ရည်ညွှန်းပြီး emoji လေးတွေမှာ thankful ဆိုတဲ့ ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်လေးထည့်ပေးထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Thankful emoji လေးဟာ အမေများနေ့အတွက်သီးသန့်ဖြစ်တာမို့လို့ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ သုံးလို့မရပဲ emoji တွေထဲမှာလဲမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီနှစ်အမေများနေ့ကျရင်တော့ ပြန်သုံးခွင့်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။
အဲ့တော့ အကြံပေးချင်တာက ကိုယ့်အကောင့်လုံခြုံစိတ်ချဖို့ဆိုရင် တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေတာထက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေကို သေချာဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
၁။ Privacy setting ကိုသေချာပြင်ဆင်ထားပါ – ကိုယ့် profile အချက်အလက်တွေနဲ့ ပုံတွေကိုတခြားသူတွေအလွယ်တကူယူသုံးလို့မရအောင်လုပ်ထားတာမျိုး
၂။ News feed မှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့ အရင်ဘဝကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်စတဲ့ application တွေလျှောက်သုံးတာမျိုးရှောင်ပါ။ ဒီ application တွေက ကိုယ့်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုခိုးယူသုံးနိုင်တဲ့ ပင်မလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၃။ ဘယ်ရောက်နေသည်ညာရောက်နေသည်အမှတ်တရ စတဲ့ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ location ကို share တာမျိုး၊ check-in လုပ်တာမျိုးကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်သင့်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်မလာခင် ကြိုပြီးကာကွယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲမလား။
၄။ ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းအလွယ်တကူမလုပ်လိုက်ဖို့နဲ့ facebook ပေါ်ကအရာရာကိုလည်း အလွယ်တကူမယုံကြည်လိုက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
၅။ ဘာမဆို share လိုက်မဟဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကိုစွန့်လွှတ်ပါ။ Share လို့ဆိုရာမှာ post တွေကို share တာနဲ့ ကိုယ့်သတင်းအချက်အလက်၊ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေဝေမျှတာ ၂မျိုးလုံးကိုဆိုလိုတာပါ။
ခေတ်တော့မှီပါစေ ဒါပေမယ့် စည်းစနစ်လေးကျကျနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုယူထားဖို့ကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့လို့ သိပြီးသားဖြစ်နေမယ့်အချက်တွေကို ထပ်ဆင့်ပြီး သတိလေးပေးလိုက်ပါရစေဗျာ။
Facebook, Smartphone app
View all posts by fairy →